I-United iyehluleka ukunciphisa isikhala samaphuzu e-City eholayo | Scrolla Izindaba
I-United iyehluleka ukunciphisa isikhala samaphuzu e-City eholayo
I-Manchester United ilahlekelwe yithuba lokwehlisa isikhala samaphuzu kwizimbangi zayo i-Manchester City, kulandela ukudlala kwabo ngokulingana kunganamagoli ne-Chelsea e-Stamford Bridge.
I-United ayizange inciphise isikhala samaphuzu ayi-10 futhi ayikwazanga ukufaka ingcindezi kubaholi be-log i-City, kodwa ukudlala ngokulingana kunike i-United iphuzu ngaphezulu kwe-Leicester City, eyahlulwa yi-Arsenal.
I-Chelsea ikwazile ukugcina umdlalo wayo wokuhlulwa, owaqala ngenkathi uThomas Tuchel ethatha izintambo zokuqeqesha. Iqembu lakhe lihleli endaweni yesihlanu, iphuzu elilodwa ngemuva kweWest Ham United esendaweni yesine.
I-United inqatshelwe okwakubukeka kuyiphenathi ecacile eyenziwe nguCalum Hudson-Odoi othinte ibhola ngesandla. Unompempe uhlole i-VAR kodwa wanquma ukungasikhiphi isijeziso.
Imenenja ye-Manchester United u-Ole Gunnar Solskjaer uthe unesiqiniseko sokuthi bekuyiphenathi leya.
“Ikakhulukazi uma emisa ukudlala futhi ewela ukuyobuka kwividiyo,” kusho uSolskjaer etshela i-SuperSport TV.
“Uma ubuka le vidiyo kuyi-handball. Kumina kubukeka sengathi basiphuce amaphuzu amabili.”
Imiphumela ye-EPL yangeSonto:
I-Leicester 1-3 i-Arsenal
I-Crystal Palace 0-0 i-Fulham
I-Tottenham Hotspur 4-0 i-Burnley
I-Sheffield United 0-2 i-Liverpool
Umthombo wesithombe: @Caleb_Mufc